Lahatsoratra nataon'i Ritesh Patil ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ritesh Patil
Ritesh Patil no mpiara-manorina an'i Mobisoft Infotech izay manampy ny fanombohana sy ny orinasa amin'ny teknolojia finday. Tiany ny teknolojia, indrindra ny haitao finday. Bilaogera mazoto izy ary manoratra amin'ny fampiharana finday. Izy dia miasa amin'ny orinasam-pampandrosoana android mitarika miaraka amina mpamorona fampiharana android mahay izay namolavola fampiharana finday vaovao amin'ny sehatra samihafa toy ny vola, fiantohana, fahasalamana, fialamboly, famokarana, antony ara-tsosialy, fanabeazana ary maro hafa ary nahazo amboara marobe tamin'izany.
Antony 10 lehibe hananganana tranokalanao amin'ny WordPress
Alakamisy, Desambra 6, 2018 Ritesh Patil
Miaraka amin'ny orinasa vaovao dia vonona hiditra amin'ny tsena ianareo rehetra fa misy zavatra iray tsy ampy, tranonkala iray. Ny orinasa dia afaka manasongadina ny marika misy azy ireo ary mampiseho haingana ny lanjan'izy ireo amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tranokala manintona. Ny fananana tranokala mahafinaritra sy manintona dia tsy maintsy ilaina amin'izao fotoana izao. Fa inona avy ireo safidy hananganana tranokala? Raha mpandraharaha ianao na te hanangana ny app anao voalohany